कपालमा अड्डिने विश्वको सबैभन्दा सानो मानव मूर्तिकला कसरि सम्भव भयो त?
हामीले बसन्तपुर र अरु दरबार स्क्वायर र गिफ्ट पसलहरु हरुमा सानो सानो सामानहरु महंगोमा बिकेको देखेका छौं। विश्वमा यस्ता पनि मान्छे पनि छन् जसले संसारकै सबैभन्दा सानो मूर्तिकला बनाउँछन्, र यसका लागि Guinness Book of World Records मा नाम लेखाएका छन्।
यो microscopic polymer मुर्ति दक्षिण अफ्रीकी मूर्तिकार जोन्टि हर्विजले बनाएका हुन्। “ट्रस्ट” नामकरण गरिएको यो ‘विश्वको सबभन्दा सानो मूर्तिकला’ को लम्बाई जम्मा सेन्टिमिटरको १/१०० भाग मात्र रहेको छ।
ट्रस्ट यति सानो छ कि यो कपालको एउटा रौँमा सहजै अट्छ। लगभग ८०×१००×२० माइक्रोनको आयाम भएको यस मुर्ति मानव केशसंग दाँजेर हेर्दा माथिको चित्रमा देखिएको जस्तो देखिन्छ।
जुन ढांचाको 3D मुर्ति बनाउन लागेको हो, त्यसको पहिले फोटो खिचिन्छ। हरेक दृस्टीकोणबाट क्यामेराहरुले फोटो खिचिन्छ। त्यसपछि ति फोटोहरुलाई एक सफ्टवेर प्रयोग गरेर 3D प्रिन्टरमैत्री 3D मोडलमा विकास गरिन्छ।
3D मोडललाई Karlsruhe Institute of Technology को Nano Micro Facility मा प्रिन्ट गरिएको थियो। यो मुर्ति संसारकै नविनतम 3D प्रिन्टर र Multiphoton Lithography नाम दिइएको प्रविधिको प्रयोगबाट बनाएको हो। अन्ततः यो कला भौतिकशास्त्रको two photon absorption लाई प्रयोग गर्छ। यो Quantum Physics प्रयोग गरिएको वास्तविकतामा उतारिएको कला।
यी मूर्तिहरुको फोटो खिच्न सक्नु पनि एउटा चुनौती हो र कुनै साधारण माइक्रोस्कोपबाट यसको फोटो खिच्न सकिन्न। इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप प्रयोग गरेर स्क्यान गर्दै यस मुर्तिहरुको तस्विर निकालिन्छ। यो "अत्यन्त सानो मुर्ति" हरु एक गोप्य राखिएको तत्व प्रयोग गरेर two-photon lithography भनिने प्रक्रिया मार्फत बनाईएको हो।
हर्विज Karlsruhe University मा nanotechnology इन्जीनियरहरुसंग मिलेर पराबैंगनी प्रकाशले रेसिनमा एकपल्ट एउटा पीक्सेलमा असर पार्छन। यसबाट प्राप्त भएको मुर्ति यति सानो हुन्छ कि यसलाई एक कमिलाको टाउको मा राख्न सकिन्छ। एक सुईको आँखा राखेर हेर्दा यो मूर्तिले एक कुनामा समेत कब्जा गर्न सक्दैन।
यो उपलब्धिले संसार हल्लाए पनि मानिसहरु यस्तो मूर्तिकला कहिल्यै बनेको नै हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्छन। “यो नाङ्गो आँखाबाट अदृश्य भएको र कम्प्युटर स्क्रिनमा मात्र यसको अस्तित्व भएकोले गर्दा यसको भरोसा कसरि गर्न सक्छौं?”भन्ने प्रश्न आउँछ। यस्को उत्तर nano-scale को अपिलमा हुन्छ। यति सानो भएको हुँदा मूर्तिकला साँच्चै अस्तित्वमा हुँदैन, वा हाम्रो दिमागले हामीलाई यसको अस्तित्वतालाई स्वीकार गर्न सक्दैन। एक तरिकाले हेर्ने हो भने यसले समकालीन कलाको सम्पूर्ण विचारलाई चुनौती दिन्छ किनभने देख्न नसक्ने कला पनि के कला हो त?
तपाईंलाई यस nano-sculptureको विश्वास लाग्छ वा लाग्दैन, सबभन्दा साना मूर्तिहरु बनाउने यस वैज्ञानिक प्रविधिले हामीलाई मोहित भने गरेकै हुन्छ। कपालको रौँमा अडीन सक्ने यति सानो स्तरमा कला हुन सक्ने हामीले सोचेको पनि हुदैनौं, तर यो वास्तविकता भइसकेको कुरा हामी अस्विकार गर्न पनि सक्दैनौं।